Fandaharana fifanakalozana mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals hanamafisana ny asa any Karaiba | Hotels & Resorts
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Fandaharana fifanakalozana mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals hanamafisana ny asa any Karaiba
Fandaharana fifanakalozana mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals hanamafisana ny asa any Karaiba
Fandaharana fifanakalozana mpikambana ao amin'ny ekipa Sandals
Ampahany afovoan'ny drafitra stratejika ataon'i Sandals ho an'ny Regional Exchange Programme ny fampitomboana ny asa mivantana ary ny fampiroboroboana ny fiparitahan'ny inter-Karaiba.
Sandals Resorts dia manamboatra ny Programme Exchange Exchange an'ny Mpikambana efa hatry ny ela mba hampitombo ny ekipany isam-paritra.
Ny Exchange Program dia fandraisana andraikitra amin'ny alàlan'ny Sandals Corporate University ary mamela ireo mpiasa vaovao hiditra ao amin'ny kolontsain'ny toeram-pialan-tsasatra.
Ity programa ity dia manamafy ny mpiasan'ny Sandal isam-paritra ary manome fahalalàna sy fahatsapana ara-kolontsaina, mametraka azy ireo ho olom-pirenena manerantany.
Nandritra ny efa-taona ho avy, olom-pirenena Karaiba an'arivony maro no nahazo tombony tamin'ny fampitomboana ny asa sy ny fampiofanana isam-paritra satria nihanaka ny ekipan'ny Sandals Team Member Exchange Program (TMEXP) efa hatry ny ela, mitady ny hampitombo ny ekipany isam-paritra 15,000 ka hatramin'ny 20,000 XNUMX ny ekipa mpikambana.
Izany dia taorian'ny fanambaràn'ny fivarotana hotely vao haingana momba ny fahazoana vaovao, ny fanitarana azy ho any amin'ny nosy Karaiba fahasivy, ary ny fiandrasana ny famerenana amin'ny laoniny ny sehatry ny fizahantany rezionaly taorian'ny voka-dratsin'ny coronavirus.
Ny tapany afovoan'ny tetikady hatrehin'i Sandals Resorts International (SRI) ho an'ny ekipa dia ny Team Member Exchange Program izay mahita ny fitohizan'ny fihetsiketsahan'ny teratany Karaiba handray andraikitra any amin'ireo trano fandraisam-bahiny maro an'ny orinasa manerana ny faritra. Ny Programme Exchange dia fandraisana andraikitra amin'ny alàlan'ny Sandals Corporate University (SCU) ary mamela ireo mpiasa vaovao hiditra ao amin'ny kolontsain'ny Resalen'i Sandals sy Beaches, raha ny mpiasa efa misy kosa dia tohanan'ny toeram-pandraisana hafa, manome fotoana iray hivezivezena sy hiharan'ny asa vaovao. tontolo iainana sy kolontsaina, manitatra ny fahaizany sy ny fomba fijeriny, manatsara ny fivelaran'ny asa aman-draharahany ary miantraika amin'ny asany amin'ny fiverenana any amin'ny toeram-pialan-tsainy.
Ny programa dia mijanona ho famantarana mazava ny fanoloran-tena ataon'ny SRI amin'ny fampidirana faritra ary mitovy amin'izany, ny fampiasam-bolany ho an'ny olony, izay nahitam-pahombiazana tamin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra toy ny Management Trainee Program (MTP). Ny MTP dia mamantatra sy manadino ireo mpiasa vao misondrotra ho tonga mpitantana ao amin'ilay orinasa amin'ny alàlan'ny fianarana sy fiofanana am-pelatanana any amin'ireo toeram-pivarotana manerana ny faritra. Ho fanampin'izay, ny orinasa dia manohy manao fanazaran-tena amin'ny fandraisana mpiasa manerana ny faritra, manolotra asa mitohy ho an'ireo teratany Karaiba ary manararaotra ny fifanarahana momba ny hetsi-bahoaka ho an'ny olona mahay.
Ny filohan'ny Executive SRI, Adam Stewart, dia nilaza fa tena manantena ny orinasa amin'ny hoavin'ny fizahan-tany sy ny andraikitr'i Sandals amin'ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka ny faritra. “Sandals Resorts International dia tena fanehoana ny fanahin'ny CARICOM. Na dia ao anatin'ny fotoana fohy aza, mifantoka amin'ny famerenana ireo mpikambana ao amin'ny ekipantsika ankehitriny hiasa izahay, mijery ihany koa ny ho avy sy ny tanjonay maharitra sy lavitra. Miaraka amin'ny fanambarànay momba an'i Curacao sy St.Vincent ary ny Grenadines, dia tsy misy isalasalana fa misy ny fahafaha-manao tombony, tsy ho an'ireo mpikambana ao amin'ny ekipa efa misy ao amin'ny Turks & Caicos, Grenada, Antigua, Jamaica, Barbados, Saint Lucia, ary The Bahamas, ihany koa. fa koa mpandray vaovao avy amin'ireo toeran'ireo nosy vaovao ireo. Izahay dia mirehareha amin'ny fomban-drazanay hatrizay hanomezana ny fitomboana amin'ny sisintany ary ny fahafahan'ny mponina isam-paritra hianatra fahaiza-manao vaovao sy hizara ny efa misy. ”
Ny programa fampiofanana manokana ataon'ny mpandray anjara, ao anatin'izany ny halavan'ny fijanonana any ampitan-dranomasina sy ny tanjon'ny fianarana, dia voafaritra amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny SCU. Ny mpandray anjara rehetra dia handefa tatitra hita taratra amin'ny faran'ny fampiofanana azy ireo ary homena mpanazatra SCU izay hanampy azy ireo mandritra ny diany fanazaran-tena.
Nanampy i Stewart: "Ny fototry ny fampiofanana anay dia ny dingan'ny fianarana lalina. Nandritra ny taona maro, nanangana kolotsaina Sandaly matanjaka sy miavaka izahay izay nahatonga anay ho marika manerantany. Tianay ny olona ho any amin'ny nosy hafa, handany fotoana kalitao ary hianatra amin'ny mpiara-miasa aminy sy teratany hafa. Ny nosy tsirairay dia miavaka ary koa ny toeram-pialan-tsasatray tsirairay. Ity programa Exchange ity dia tsy vitan'ny fanamafisana orina ny mpiasa isam-paritra fa koa mba hanomezana azy ireo karazana fampahafantarana sy fahatsapana ara-kolontsaina izay mametraka azy ireo ho olom-pirenena manerantany. Tena faly izahay noho izany hampisondrotra ity programa ity ary hanomboka izay fantatsika fa ho modely ho an'ny fampiofanana, fampandrosoana ary asa ho an'ny faritra. ”
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Programs an'ny Sandals Corporate University, tsidiho: https://www.sandals.com/about/